Isihlahla se-Pineapple Guava: Ukuphathwa kweTangy Tropical - Izithelo
Isihlahla se-Pineapple Guava: Ukuphathwa kweTangy Tropical
amafutha amahle ebusweni bakho
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Ngokushesha
Konke Mayelana noFeijoa
Lapho ngiseyingane, ngangijabule ngesihlahla sikaphayini sikamkhulu sikaphayinaphu. Wayibiza ngokuthi yi-feijoa, futhi uma isivuthiwe ngangithola isikhwama esiphuphumayo somkhiqizo. Eningizimu yeCalifornia lapho engangihlala khona ngaleso sikhathi, kwakungavamile ezitolo!
Manje sengikhulile, sengingumlandeli omkhulu we-acca sellowiana, kwesinye isikhathi obizwa nge-feijoa sellowiana. Kusengavamile eCalifornia njengesithelo sesivuno, njengoba singonakala ngaphambi kokukwenza ukuthengisa. Kepha kumuntu osebenza engadini, kuyisitshalo esimnandi esingatshalwa njengesihlahla noma isihlahlana!
Ake sixoxe ngazo zonke izici zalesi tropical esithandekayo. Kusukela ekukhanyeni okudinga ukukhiqizwa kwezithelo, sizokwemboza konke okudingayo ukuze sikhule ekhaya. Lesi yisitshalo sami engisithandayo, futhi kuzoba ngesakho futhi!
Imikhiqizo Emikhulu Yabalimi beFeijoa:
I-Neem Bliss 100% Amafutha we-Neem acindezelwe ngokubandayo
I-Serenade Garden Disease Control Fungicide
Izithelo zesihlahla sikaphayinaphu sikagwava zi-oval noma zimise okwamapheya futhi ziluhlaza okotshani.
Amagama ajwayelekile Uphayinaphu guava, mangosteen, feijoa
Igama Lesayensi I-Acca sellowiana noma i-feijoa sellowiana
Isikhathi sokuhluma Amaviki amathathu ukuhluma imbewu
Izinsuku Zokuvuna Imvamisa kungakapheli izinyanga eziyisithupha iqhakazile
Khanyisa Kukhethwa ilanga eligcwele, umthunzi oyingxenye KULUNGILE
Amanzi: 1 ″ masonto onke ukuthola izithelo ezinhle
Umhlabathi I-Loamy, i-organic-rich, idonsa kahle
Umanyolo Umanyolo we-8-8-8 oyimbudumbudu okhishwa kancane
Izinambuzane Isikali sezinambuzane, izimpukane zezithelo
Izifo Imvamisa indawo yeqabunga le-cercospora noma isikhutha
Isihlahla segwava esivuthiwe. Izithelo ziwela esihlahleni lapho sezivuthiwe.
Ingabe uphayinaphu guava feijoa sellowiana noma i-acca sellowiana? Yebo, empeleni, yikho kokubili. Igama lalo lohlobo lwaqanjwa ngokuhlonipha uDon da Silva Feijoa, isazi sezitshalo saseSpain. Igama lohlobo luhlonipha uFriedrich Sellow, waseJalimane oqoqe isampula lakhe lokuqala.
Ongowokuzalwa eBrazil, ungatholakala naseParaguay, eColombia, e-Argentina nase-Uruguay. Ingxenye yomndeni iMyrtaceae, ibizwa ngokuthi i-guavasteen, i-feijoa, ne-guava yomkhiwane. Akuvamile ukuthi kubizwe ugwava waseBrazil noma igama lawo elingajwayelekile, ubhanana waseNew Zealand.
Lesi sihlahla singafinyelela ukuphakama okungafika kumamitha angama-20 ubude. Kepha ngenxa yomkhuba wayo onemikhono eminingi, iphinde itshalwe ngobuningi ukwakha uthango noma i-landscape windbreak. I-evergreen ekhangayo, ikhula kahle ezindaweni ezingama-8-10.
Amaqabunga awo aluhlaza okotshani ngombala ongaphansi osiliva-mpunga. Lezi zinhlobo zingathuthukisa amagatsha avela esitshalweni. Ukusika nokuqeqesha kungakha iphethini ekhula ngokwengeziwe efana nomuthi. Ukuyivumela nje ukuthi ikhule yodwa kukhiqiza amagatsha amade, azacile ane-canopy ebanzi ezeluleko zawo.
Amagatsha ansundu ngamagxolo ampunga avele axebuke ngezikhathi ezithile. Amaqabunga akha ngazimbili eziphikisanayo, futhi abekwa phezulu egatsheni. Ayiqhakazi engxenyeni engezansi yesitshalo.
Entwasahlobo, izimbali ezibomvu ezibukekayo zivela zodwa noma ngamaqembu. Ngayinye yalezi zimbali inamacembe amane anenqwaba kanye neqoqo lama-stamens amile ngokugqamile ansomi. Lezi zimbali ziyadliwa, futhi ukuzisusa akuthinti ukukhula kwezithelo.
Izithelo ziluhlaza okotshani futhi zimise okweqanda. Uma isikiwe, ingaphakathi lithambile, linokuthungwa okuyimbudumbudu negumbi lembewu le-gelatinous. Ukunambitheka kumnandi futhi kuyisigaxa, isiphambano phakathi kukaphayinaphu nogwava noma uphayinaphu nesitrobheli. Ngisho nangaphambi kokuba ivuthwe, inuka iphunga.
Izinhlobo ezinhlobonhlobo zezilimo ziyatholakala. I-Coolidge, i-Pineapple Gem, ne-Mammoth yizona ezivame kakhulu engxenyeni yami yaseCalifornia, kodwa ezinye izinhlobo eziningi zikhona emhlabeni jikelele.
Izimbali ziyabukisa, zinamacembe amane anamanzi kanye neqoqo lesikhungo lama-stamens.
Uzokuthanda ukukhululeka kokunakekelwa kwalezi zitshalo. Ziyizithelo ezinhle zokuqala zabalimi, futhi zithandeka kusimo sengadi!
Ilanga eligcwele lihamba phambili. Ngenkathi bekwazi ukubekezelela umthunzi oyingxenye, bakhetha ukukhanya kwelanga okuningi. Labo abasendaweni engu-10 kuya ku-11 bangafuna ukukucabanga ukubabeka lapho benomthunzi wantambama.
Izitshalo zaseTropical ezinjengesihlahla se-feijoa zithanda amazinga okushisa afudumele. Uma sesisunguliwe, isitshalo esidala singakwazi ukubekezelela amazinga okushisa aze afike ku-15º Fahrenheit ebusika phansi kakhulu. Izindawo lapho ubusika bupholile khona (30-40º) kanti ihlobo liphakathi kuka-80-90º zilungile.
Uma sezisunguliwe, izitshalo zakho ziyabekezelela isomiso, kepha ukuthela kudinga amanzi. Ukuze uthole izithelo ezinhle kakhulu, nisela izitshalo zakho njalo. Emvelweni yabo yendabuko bathola imvula engama-intshi angama-30-40 ngonyaka, ngakho-ke balwela ukuchelela okufanayo. I-intshi eyodwa yamanzi ngesonto ibhentshi elihle. Nikeza umswakama owengeziwe ngesikhathi sezulu esishisayo, ikakhulukazi uma uthela izithelo.
Ukubheka okuseduze amaqabunga avuthiwe e-feijoa. Umthombo: Lorin Nielsen
Ngenkathi izokhula enhlabathini emaphakathi, i-acca sellowiana ithanda inhlabathi ecebile ngemvelo. Faka umquba ngaphambi kokutshala. Indawo kufanele idonse umswakama okweqile kahle. Njengoba zimile kancane, lezi zitshalo azikubekezeleli ukubhukuda ngasesizindeni.
ungakanani ushokoledi omnyama olungele wena
Gwema inhlabathi enobumba eqinile uma kungenzeka, njengoba izimpande zinenkinga enzima kuzo. Inhlabathi yensimu evulekile, ebabazekayo ilungile, ikakhulukazi ehlanganiswe umquba.
Inhlabathi yeSandier imvamisa ayinawo amanzi anele okukhiqiza kahle. Ngalokhu, uzodinga ukuchelela kaningi. Ukuchelela ngenkasa njenge ama-soaker hoses kungenza kube lula ukuchelela.
Kunconywa izithombo zommbila zotshani obukhulu.
Zalisa njalo ezinyangeni ezimbili ngomanyolo olinganiselayo ongu-8-8-8 kusuka ngo-Ephreli kuya ku-Okthoba. Yisabalalise ngokulinganayo ngaphansi kwesihlahla noma umbhede we-shrub okungenani u-5 ″ kude nesiqu.
Gwema ukufaka umquba ekwindla sekwedlule isikhathi ngoba lokhu kungakhuthaza ukukhula okusha njengoba isimo sezulu sibanda.
Uma ekhule njengesihlahlana noma uthango, amagatsha angahlala phansi phansi. Umthombo: Lorin Nielsen
Izicucu nembewu yizindlela ezivame kakhulu ukusabalalisa lezi zitshalo.
Ukusikwa kwegatsha kusuka kuzeluleko ezintsha nezincane kuhle. Sebenzisa i-hormone eyimpande ukukhuthaza ukukhula kwezimpande. Qinisekisa ukuthi ukusika kwakho kufudumele, bese ukubeka endaweni ethile lapho bekwazi ukufinyelela khona ilanga eligcwele. Gcina inhlabathi imanzi futhi ifudumele ngesikhathi sokuqothula.
Ukuhluma kwembewu kuthatha cishe amasonto amathathu. Kufanele zitshalwe emhlabathini oyinyumba, ngoba ukufutheka kuvamile. Sebenzisa imbewu esebenzayo kusuka enkampanini ethembekile ukuthola izinhlobo ezithile. Ngenkathi imbewu evunwe ekhaya ingahle isebenze, ingahle ingakhiqizi impinda yangempela yesitshalo sayo somzali.
Ukutshala iziqukathi kuyindlela ongakhetha ngayo ne-ananas guava! Abantu abaningi babe nempumelelo enhle ngokugcina izihlahla zabo ezitsheni ezinkulu. Qiniseka ukuthi izimpande zinendawo yokwelula, ngoba zivame ukuba nezimpande ezijulile. Imbiza ebanzi, engajulile njengesiqu somgqomo ingcono kunesitsha esinde, esijulile.
Ama-50 shades amnyama ngokombono wamakristu
Uma ukukhula kwayo kuhamba kancane kakhulu, kungaba yisikhathi sokuphindaphinda. Entwasahlobo, susa isitshalo sakho embizeni yaso yamanje bese uhlola izimpande. Uma beqala ukuzungeza ngokuma kwembiza, khetha isitsha esikhulu. Susa inhlabathi endala futhi unikeze inhlabathi entsha, ecebile lapho utshala kabusha. Tshala ngokujula okufanayo nakuqala.
Njengomuthi, amahlumela amaningi ayagawulwa, kuthi isiqu esisodwa esikhulu siqeqeshelwe phezulu. Umthombo: Lorin Nielsen
Thena ekwindla sekwephuzile noma ekuqaleni kobusika njengoba isitshalo sakho singena esimweni saso sasebusika esingasebenzi. Umgomo ukusika lapho ungakhiqizi ngentshiseko amahlamvu amasha.
Uma uyiqeqeshela ukwakheka kwesihlahla, gawula wonke amagatsha noma amahlamvu kusuka phansi kwesiqu esikhulu. Ungasusa futhi wonke amagatsha aphansi kusuka ngaphansi kwe-1/3 phansi kwesiqu, njengoba engeke aqhakaze noma izithelo.
Nciphisa ukukhula okuqondile ukuze kuvumele ukukhanya okwengeziwe ku-canopy. Sebenzisa inzalo dlula izikele zokuthena ukwenza ukusikeka kwakho. Gwema amagatsha anezimbali kuwo.
izikhali zokuzivikela zabesifazane
Ngentwasahlobo nasehlobo, bukela amagatsha ahlangana noma awelele komunye nomunye. Ukungqubuzana kungadala ukulimala kwesithelo noma amagxolo. Susa amagatsha abuthaka kulezi zindawo, ushiye lawo aqinile endaweni.
Amagatsha afile noma alimele angasuswa noma kunini.
Ukhetha ifomethi ye-shrub? Nquma ukubumba nganoma yisiphi isikhathi, yize izikhathi zakho ezinkulu zokuthena kufanele zibe njengoba kushiwo ngenhla. Awudingi ukususa ukukhula okuphansi esiqwini, ngoba lokho kuzosiza ukugcwalisa izikhala phakathi kwezitshalo.
Ngaphakathi, isithelo sine-granular inyama namakamelo embewu e-gelatinous.
Izimbali zenzeka e-US phakathi kuka-Ephreli noJuni. Imvamisa, ama-feijoas azovuthwa kungakapheli isikhathi esibekiwe sezinyanga eziyisithupha kusukela lapho kuvela khona izimbali.
Lesi sitshalo sokuzivuna. Lapho izithelo zivuthwa, zizokwehla zodwa. Kunconywa isithombo semifino esindayo sotshani obuthambile ngaphansi kwezitshalo zakho ukuvimbela ukulinyazwa. Qoqa amagwava awile ngaphansi kwezitshalo zakho nsuku zonke.
Ezimweni ezifudumele, izithelo zizohlala izinsuku eziyi-3-4 ngaphambi kokuba ziqale ukubola. Ukugcinwa okubandayo ngamadigri angama-32 kunganweba ubude bayo. Uma usususwe endaweni ebandayo, sebenzisa ngokushesha ukuvimbela ukonakala.
I-feijoa encane ngefomethi efana ne-shrub yemvelo. Umthombo: Lorin Nielsen
Okuncane kakhulu kuzodala ubunzima kogwava lwakho lukaphayinaphu. Noma kunjalo, ake sidlule ezinkingeni ezimbalwa ezingase ziphakame.
Ukushisa okweqile ngesikhathi sesithelo kungadala ukwehla komkhiqizo ngaphambi kwesikhathi. Uma unokushisa okungazelelwe, okuhlala isikhathi eside, cabanga ukubeka indwangu yomthunzi phezulu. Umthunzi wantambama unganciphisa amathuba okwehla ngaphambi kwesikhathi. Ukunisela okungeziwe kungasiza futhi.
E-United States, isikali esimnyama yisinambuzane esivame kakhulu. Ezinye izinhlobo zesikali zivamile phesheya.
Izimpukane zezithelo ingaba yinkinga phakathi nehlobo. Thatha umkhiqizo owile lapho wehla.
Kuzo zombili izimo, thatha uwoyela kungasiza ukuvimbela ukubhebhetheka kwezinambuzane ngaphandle kokulimaza izithelo.
Izifo ezingadini azivamile kulezi zinhlobo. Ezimweni ezingavamile, indawo yeqabunga le-cercospora kungavela.
ngaphambi nangemva komjovo wezindebe
Isikhunta seSooty, esibizwa nangokuthi isikhutha , kungenzeka nasezifundeni ezinomswakama omkhulu.
Le feijoa encane isezingeni lokuqeqeshelwa ifomu lomuthi wendabuko. Umthombo: Lorin Nielsen
Q: Ingabe uphayinaphu lukagwava ludinga impova?
A: Izinhlobo eziningi zipholishwa yinyosi noma ezinye izinambuzane ezithutha impova. Ngokuya ngokuthi iyiphi i-cultivar oyikhulisayo, ungadinga isitshalo esingaphezu kwesisodwa. Izinhlobo eziningi okungenani ziyazithela kepha zithwala isivuno esikhulu ngesinye isitshalo esiseduze.
Q: Ziba nkulu kangakanani izihlahla zikagwava zikaphayinaphu?
A: Izihlahla eziningi ezivuthiwe zigcinwa ngaphakathi noma ezungeze izinyawo eziyi-10-15 ubude, kepha zingakhula zibe ngamamitha angama-20. Ukukhula okufana nesihlahla, njengamahedge e-feijoa, kuvamise ukuba ngamamitha ama-3-8 ubude.
Sidinga Izikhangiso Eziningi Zobuhle Njengalo Mkhankaso Wokunakekelwa Kwesikhumba Okungakatholakali ngokuphelele
Ngenze iYoga ngeMbuzi Emhlane Wami Futhi Kwakumangaza iZen
I-Creeping Speedwell: Izimbali Ezihle Nezembozo Eziminyene
Abangani Ababili, Omunye Ukuzibulala
Umama Wezinkulungwane: I-Succulent Yokuzihlwanyela
ngithi ngiyakuthanda futhi maduzane
kusho ukuthini ukuphupha ngezicabucabu
izipho zabantu ngokuhlukaniswa